एकाबिहानै कालिका मन्दिरको पूजा गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज - satkar post
एकाबिहानै कालिका मन्दिरको पूजा गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
मंसिर २२, २०७६ मा प्रकाशित
आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर २२ गते आइतबारको राशिफल । इ.स. २०१९ डिसेम्बर ८, ने.सं. ११४० थिंलाथ्व, मार्ग शुक्लपक्ष । एकादशी, ७:३२ उप्रान्त द्वादशी ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) इच्छाशक्ति बढ्नाले कीर्तिमानी कामको यश लिने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। समय फुर्सदिलो रहनेछ तापनि रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघ’टका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइनेछ। साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। प्रेम र मित्रताको ब’न्धन क’सिनेछ। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) परिस्थितिले ख’र्च नि’म्त्याए पनि वि’शेष पुण्यकर्म सम्पादन हुनेछ। लामो यात्रा अथवा रमाइला ठाउँहरूको भ्रमण गर्ने अव’सर प्राप्त हुनेछ। पहिलेका क’मजोरी सच्याउने अ’वसर प्राप्त हुनुका साथै मनको ड’र उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। आ’लोचकहरूले कम’जोरी औंल्याउने हुँदा वि’शेष ध्यान दिनुहोला। सं’कट टर्नेछ तर ख’र्च बढ्नाले रकम सञ्चय गर्न नसकिएला। मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) नयाँ काम र आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। पढाइमा प्रगति हुनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौ’का छ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि तथा पशुपालनमा सामान्य र नोकरी तथा व्यापारमा प्रशस्त लाभ हुने योग छ। सञ्चित रकमको उपयोगले पनि फाइदै दिलाउनेछ। देश–विदेशमा मान–सम्मान पाइने समय छ । कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) केही वि’वादास्पद जिम्मे’वारी वहन गर्नुपरे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। अव’सरका लागि वि’वादास्पद जि’म्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। तापनि भविष्यका लागि दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौ’का छ। मेहनतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। तर आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चे’ष्टा गर्लान्।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) अरूको सहयोगमा जु’ट्नुपरे पनि आफैंलाई फाइदा हुनेछ। समाजमा तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनेछ। रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। कर्मयोगले वि’शेष जिम्मेवारी दिलाउन सक्छ। सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ हुने काम शुभारम्भ हुन सक्छ। धन तथा ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। वि’शेष जिम्मेवारी हात पार्ने मौ’का छ। कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) प्रतीक्षित नतिजा क’मजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। परिबन्धले सम’स्या नि’म्त्याउन सक्छ। अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ। सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि हातपार्न धेरै श्रम गर्नुपर्ला। परि’स्थितिवश चिताएको काममा वि’लम्ब हुनेछ। अ’वसरले प’छ्याए पनि फाइदा उठाउन चु’नौतीसँग जु’ध्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यका लागि आराम र खानपानमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) परिवेश उल्लासमय रहे पनि बा’ध्यतासामु नि’रीह बन्नुपर्ला। प्रतिष्ठा एवं लोकाचारका लागि अनावश्यक ख’र्च बढ्न सक्छ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा नि’खारता आउनेछ। वि’शेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको ब’न्धन क’सिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने समय छ। व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ । बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) लक्ष्यमा पुग्न अरूका लागि केही क’ठोर नीति अव’लम्बन गर्नुपर्ला। दौ’डधुप गर्नुपरे पनि पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। मिहिनेतले प्रति’स्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। काममा आफ्नो श्रम परे पनि प्रतिफलमाथि अरूले राज गर्नेछन्। ठूलाको वचन हार्न नसक्दा दुःख पाइनेछ। ई’र्ष्या गर्नेहरूलाई तह लगाउन सकिनेछ। दिगो काममा जग बसाउने मौ’का छ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने मेहनतले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन्। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्ने देखिन्छ। आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बौद्धिक प्रति’स्पर्धामा पनि अरूलाई उछिन्न सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौ’का छ। मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) मान्यजनसँग अस’मझदारी बढ्नेछ भने हठ गर्ने बानीले स’मस्या नि’म्त्याउन सक्छ। महत्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। मिहिनेतले फाइदा दिलाउनेछ। बुद्धिको उपयोगले ज’टिल ठानिएको काम सम्पादन होला। आजको कामबाट दिगो फाइदा हुनेछ। मनको ड’र उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। साथीभाइ र आमाको सहयोग लिँदा काम सम्पादन हुन सक्छ। कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। उद्यो’ग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ। तर, प्रति’स्पर्धीहरूले सताउन सक्छन्। केही सं’घर्ष गर्नुपरे पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। सहयोगीहरूले हात झिक्नाले केही सम’स्या भने बढ्न सक्छ। सहयोगको आशा देखाउनेहरूबाट धो’का हुन सक्छ, स’जग रहनुहोला। व्यावसायिक काममा भने राम्रै लाभ उठाउन सकिनेछ। मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अव’सर दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा स’म्झौता गर्ने समय छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई नि’खार्ने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ।